Maxaa ka jira wafdigii ka socaday Dalka Ereteriya in uu qeyb ka qaato dhax dhaxadinta Soomaaliya iyo Soomaliland? – Walaal24 Newss
March 23, 2019	0	By walaal24
Wararka ay isla dhaxmarayaan inta badan dadka shacabka maamulka Soomaliland ayaa waxay ku tilmaamayaan in Dowlada Erateriya ay u muuqato in ay door mihiim ah ka ciyaari doonto wada haddalada Somaliland iyo Soomaaliya, kuwaas oo lagu wado inay dib u furmi doonaan dhawaan.
Socdaalkii ay todobaadkii la soo dhaafay ay dalka socdaal ku yimadeen wefti culus oo ka socda Dowlada Erateriya oo usoo diray Madaxqweynaha Dalkaa Isaias Afwerki, kuwaas oo kullamo la yeeshay Madaxweynaha Somaliland, isla markaana socdaal ku tegay xarumaha siyaasadda dalka laga jaan-gooyo goobo kale.
Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi hadaladii uu jeediyay kagana hadalayay imaashaha booqashada ay ku yimadeen wafdiga uu hogaamiyay Wasiirka Arimaha Dibada ee dalka Ereteriya maamulka Soomaliland.
Madaxweyne Biixi waxaa ka mid ahaa hadaladiisa ay soo qaateen ama ay ka dhan dhansadeen ayaa hore u sheegay inuu Madaxweynaha dalka Erateriya uu door mihiim ah ka ciyaarayo is badelka Geeska Afrika ka curtay , isagoo ku amaanay Mr Isaias Afwerki halgankii uu soo galay gobanimadoonkii dalkiisa Erateriya, waxaanu u dhignaa hadalka Madaxweyne Biixi sidan“Dabaysha ka socota ee la yidhi nabadayta geeska Afrika iyo waa laga midoobayaa ay Dowladaha qaarkood ku dhawaqeen.
Madaxweynaha Erateriya Isaias Afwerki intii uu noolaa ilaa maalintuu isagoo injineer bilaabay sanadka uu horeeya uu ka tegay ilaa maanta wuxuu ku jiray Dagaal uu gobanimada ugu doonayo Erateriya 32 sano dagaal ayuu ku jiray markii dagaalkii uu dhammaday Itoobiya ayaa cod ka qaaday oo Xorriyad ayuu ku qaatay.
Iyadoo Itoobiya ay dagalameen oo ay dal isku qabsadeen dad badan oo malaayiin gaadha ayaa ku dhintay haddana 11 sano oo kale ayuu gadoon ahaa oo uu u adkaystay cadaasit kasta oo la saaray, inuu u hoggaansamo gudidii jimciyada quruumaha ka dhaxasa ee shirkii Algerias inuu aqbalo isagoo uga diiday afar mitir oo dadlkiisa oo Baadhama Tuullada ah xadka u jirta in laga qaado oo cid kale la siiyo ayuu tu wal-ba u maray tiisii ayey noqotay
Hey’ada NISA oo gacanta ku soo dhigtay nin ka qeyb qaata Qaraxyada Baabuurta lagu xiro
Dhageyso: Waxgaradka Degmada Karaban ee Gobolka Gedo oo ka cabanayay Xildhibaan IBI
Dhageyso: Kulanka Golaha Wasiirada oo lagu ansixisay hindise sharciyeedka Maamulka Dakhliga
Daawo: Ra’iisal wasaare Kheyre oo soo xiray kulan sanadeedka Golaha Wasiirada
Daawo: Gudomiyaha iyo Gudigii nabadeynta oo ka waday dibu u heshiista deganada Caabudwaaq oo ka hadlay waxyanihii u qabsoomay iyo halka ay wax u maryaan